PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-03-11 - SIVULA AMEHLO ABACULI:
Ilanga langeSonto - 2018-03-11 - Izindaba - KNOWLEDGE SIMELANE
Sizogxila ekusebenziseni iphimbo ngendlela eyinzuzo emikhakheni eminingi yempilo engangenisela umnikazi walo imali ebhekile. Baningi abagxila emculweni bakhohlwe ukuthi nayo imiculo lena yehlukene kaningi.
Njengoba umculo untshontshwa kangaka, nezinga lokudayiswa kwawo selehlile kungasafani nangeminyaka yawo-1980 abaculi abaningi baphephela ekuqashweni yizinkampani ezenza izikhangiso. Uma umculi esedume njengemali abanikazi bemikhiqizo basuke sebemfuna uthuli, besebenzisa udumo lwakhe ukukhangisa imisebenzi yabo. Ezinye zezindlela okungasetshenziswa ngazo iphimbo kungene imali yilezi:
* Ukucula amaculo amafushane ezikhangiso zemikhiqizo eyahlukene ( jingles).
* Ukusho izikhangiso emisakazweni nakumabonakude ( voice overs).
* Ukudlala imidlalo yomoya ( radio drama).
* Ukucula amaculo emidlalo kamabonakude.
* Ukushintsha iphimbo lifane nelezilwane ezisuke zikhonjiswa emidlalweni kamabonakude noma opopayi.
* Ukumemezela imikhiqizo ezitolo nasemabhasini.
Kulezi zinto esesizibalile kufuneka abantu abanesineke, abalalelayo futhi abakhaliphile. Emidlalweni yomoya, thina esesike sayidlala, singasho ukuthi kufuneka umuntu okwazi ukuthi athi efunda okubhaliwe ebe enza okuthiwa akakwenze konke ngasikhathi sinye.
Isibonelo nje, uma kubhalwe ukuthi uzokhuluma ngephimbo elidabukisayo noma elilusizi kumele ukwenze lokho ngaso leso sikhathi.
Uma kwenzeka kuthiwa uzothi ukhuluma ubuye uvale umnyango ubabaze kulindeleke ukuba konke lokho ukwenze ngobuciko, kungezwakali ukuthi ufunda phansi. Nakhona lapha kumele azi umdlali ukuthi uma elokhu ephindiswa uchitha isikhathi sabanye abashibilikayo uma befunda, abangagcina sebecikeka bamge- beze kabi.
Uma kwenziwa izikhangiso, kumele ozobe ezifunda phansi azi ukuthi abanikazi bomkhiqizo bangase bamphindise kaningi befuna ukuba akhiphe leli phimbo abalidingayo kumbe ukugcizelela abakudingayo. Ayisebenzi indaba yenhliziyo encane kule misebenzi - ubeka umoya phansi.
Kubalulekile ukuba abafisa ukusho izikhangiso bazi ukuthi isikhathi siyimali, abanikazi bomkhiqizo basuke bekhokhele isikhathi esithile ngakho ozobe enza izikhangiso kumele akubeke engqondweni lokho, angankwankwazi futhi angehluleki ngoba lokho kungasho ukuthi imali yabo icwilile.
Kusuke sekumele bathole omunye umuntu ozowenza kahle umsebenzi.
Iphimbo lingamsebenzela umuntu nokuba aqashelwe ukuba ngumphathi wezinhlelo onekhono.
Phela umphathi zinhlelo onekhono yilowo okwaziyo ukuthi kumele alisebenzise kanjani iphimbo lakhe emicimbini asuke ekuyo ehlukene. Uma umuntu ezophatha uhlelo lomngcwabo kumele akhiphe iphimbo ngendlela enesizotha, kanjalo uma esemicimbini yentokozo kumele aphaphame ahambe nezimo, angaphambanisi.
Umphathi wohlelo oqeqeshekile akankanti futhi isikhathi uyasazisa.